Xoojinta amniga Puntland oo Garoowe: looga shiraayo | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Xoojinta amniga Puntland oo Garoowe: looga shiraayo
Xoojinta amniga Puntland oo Garoowe: looga shiraayo
Kulan looga arrin saday adkaynta nabadgalyada deegaannada maamulka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka.
Kulanka oo ay ka qaybgaleen mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga Puntland, culimaa’uddiin, odayaal-dhaqameed iyo waxgarad ayaa diirada lagu saaray sidii loo xallin lahaa is-maandhaaf u dhexeeya madaxweynaha Puntland iyo sarkaal sare oo katirsan booliska maamulka.
Qodobbo ay ku jiraan in la dhiso guddi ka shaqeeya amniga iyo in wadajir tallaabo looga qaado cid kasta oo horseedaysa xasillooni-darro ayaa laga soo saaray shirka, sida ay warbaahinta u sheegen wasiirka amniga ee Puntland iyo odayaasha dhaqanka qaarkood.
Wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Qarjab ayaa sheegay in maamulku gudanayo waajibaadkiisa, si uu u xaqiijiyo mustaqbalka bulshada.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo taliye ku-xigeenkii hore ee booliska Puntland, Jenneraal Muxiyaddiin Axmed Muuse ayaa goor sii horraysay isku khilaafay arrimo la xiriira maaraynta ciidammada.
Jenneraal Muxiyaddiin ayaa ka gadooday xil ka-qaadis lagu sameeyay oo ka dhalatay is-maandhaafka, wuxuuna la baxsaday askar ka tirsan ciidanka maamulka, kuwaas oo ay xoojinayso malleeshiyo beeleed isaga taageersan.
« (DHAGEYSO) B,Maanta iyo Soomaaliya Ee Radio Maanta 25-06-2015
Obama’s plan to visit Ethiopia criticised as ‘gift’ for repressive government »